ညနေမျှားတဲ့ ကြယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ညနေမျှားတဲ့ ကြယ်
Posted by ရင္ နင့္ ေအာင္ on Feb 11, 2012 in Creative Writing, Short Story |2comments
ရုတ်တရက်ကြီး ပေါ်လာတော့ လှန့်တော့သွားတာပေါ့ဗျာ…
ဒါပေမယ့် စပ်စုချင်တဲ့ စိတ်နဲ့
အဲဒီအလင်းတန်းကြီးထဲ ဝင်ကြည့်မိလိုက်တယ် ….”
ကျွန်မ အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်ရှင့် …
ရှင်တို့သိလား … အိပ်မက်က ထူးဆန်းလိုက်တာ …
အိပ်မက်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်မအနားကို … အလင်းတန်းကြီး ကျလာတာလေ …
ကျွန်မဖြင့် လန့်လိုက်တာ.. နောက်ကို ဆုတ်လိုက်မိတာပေါ့ …
မကြာပါဘူး …. အဲဒီအလင်းတန်းထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ် …
ကျွန်တော် သူမဆီကို တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ သူမဆိုတာ အရမ်းလှတဲ့ မြောက်ကျွန်းသူလေးပေါ့။ သူမက အပင်တစ်ပင်ဆီက အသီးကို ခူးနေတာ ဒဏ္ဏာရီဆန်လိုက်တာ။ သူမအကြည့်တွေက ကျွန်တော့်ကို ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တဝါတစ်ယောက်လို စူးစူးရဲရဲကြီး ကြည့်နေလေရဲ့။ သူမအသားအရည်တွေက ဖြူတာလည်းမဟုတ်၊ ဝါတာလည်း မဟုတ်၊ ညိုတာလည်းမဟုတ်။ အရမ်းလှနေပေမယ့် ကျွန်တော်က ဘာသာပြန်ရခက်နေခဲ့တယ်။
အို … သူ ကျွန်မဆီကို တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်လာပုံက မြေကြီးနဲ့မှ ထိပါရဲ့လား။ သူက ကျွန်မတွေ့ဖူးတဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ မတူဘဲ ကျွန်မအတွက်တော့ နားလည်ရခက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လိုပဲ။ အဲဒီ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်က ခုဆို အတောင်ပံတွေ ခတ်ပြီး ကျွန်မဆီ နီးလာပါရောလား။ သူ့အကြည့်တွေကို ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ ရှောင်လွဲလို့မရအောင် ဖြစ်ရတာ။ သူဘယ်သူလဲဟင် …။ ကျွန်မဆီကို ဘုရားသခင်က ပို့လိုက်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခု ဖြစ်နေမလားလို့ ကျွန်မက စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်မိသေးတယ်။ ဟင် .. မဟုတ်သေးပါဘူး.. လို့ ပြန်တွေး ..။ အို … အဲဒီအချိန်မှာ …. သူက ..
ကြယ်လေးတစ်ပွင့် … အရမ်းလှတဲ့ ကြယ်လေးပေါ့
ကျွန်မကို ပေးတယ်လေ ..။
သူမက ကျွန်တော်လက်ထဲက ကြယ်လေးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြန်ကြည့်တယ်။
“ရော့ ယူလေ .. မင်းအတွက် လက်ဆောင် ..”
သူမ ကျွန်တော့်ကြယ်လေးကို တယုတယ ယူပြီး ပြုံးပြပါတယ်။ အဲဒီအပြုံးဟာ မိုးရွာပြီး ထွက်လာတဲ့ သက်တန့်တစ်ခုလို အရမ်းလှလွန်းတယ်။
“လှတယ်နော် ကြယ်လေးက …
သူ့နာမည်က ဘာတဲ့လဲဟင် …”
“သူနာမည်လား ဇူးတဲ့ ..”
ကျွန်မ သူပေးတဲ့ ကြယ်လေးကို သိပ်တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးပါတယ်။ ကြယ်လေးနာမည်က ဇူးတဲ့ … လှလိုက်တာရှင်။
“ကြယ်လေးက ညဆို လင်းလားဟင် …”
“လင်းတာပေါ့ … သူ့ကို ကောင်းကင်က မနည်းလိုက်ဖမ်းခဲ့ရတာ
အို.. ကျွန်မအတွက်တဲ့။ ကျွန်မရင်တွေခုန်လိုက်တာ။ သူ့အကြည့်တွေက ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို အုပ်မိုးလိုက်သလိုပဲ။ ကျွန်မသူနဲ့ အကြည့်ချင်း မဆုံရဲတော့လောက်အောင် ရင်တွေတုန်နေမိတယ်။
ကျွန်မနာမည် ညနေမိုးပါ ..
ညနေခင်းလေးတစ်ခုဟာ အရမ်းကို လှပနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ညနေမိုးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ အဲဒီညနေခင်းလေးကို အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးလိုက်ရတာ အရမ်းကို ပျော်ခဲ့ရပါတယ်။
“ကြယ်လေးကို သိမ်းထားနော် ….”
“သိမ်းထားမှာပေါ့ … အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ …”
သူမ ကျွန်တော့်ကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေပြီးမှ သူမက ဖြူစင်စွာ ပြုံးပြပါတယ်။
“ကြယ်လေးနဲ့ ကိုနဲ့က အတူတူပဲလေ …” တဲ့။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ။ သူဟာ ရာဇဝင်ထဲက သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို အရမ်းရဲတာပဲရှင်။ သူ့ကို မချစ်ဘူးလားတဲ့လေ။ ကျွန်မ ဘယ်လို ငြင်းဆန်ရမလဲ …။ ကျွန်မမှာ သူ့ကို ငြင်းဆန်ဖို့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးမရှိတာ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မသိပ်သိနေခဲ့တာပေါ့။
ပိုဆိုးတာက သူကလေ …။ ကျွန်မကို ရုတ်တရက်ကြီး အုပ်မိုးပြီး ဖက်ပစ်လိုက်တာ။ ပြီးတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက လှုပ်နေတယ်။ ဟုတ်တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို လှုပ်ပြီးပြောနေတယ်။ ဘာများလဲ။ ကျွန်မသေချာ … နားထောင်ကြည့်တော့။
“မင်းကို …. ကိုယ်သိပ်ချစ်တယ် .. အရမ်းချစ်တာပဲ” တဲ့။
ကျွန်မ ပျော်လိုက်တာရှင်။ သူပြောတာကို အကြွင်းမဲ့ ယုံလိုက်တာပေါ့။
ပျော်စရာမနက်ခင်းလေးတစ်ခု သူ့အတွက်မွေးဖွားပေးခဲ့သလိုပါ။ မိုးဇက် သူ့နေတဲ့ ထပ်ခိုးလေးက နိုးလာတော့ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သူ့အခန်းပြတင်းဝဆီက ထိုးဝင်လာတဲ့ နေရောင်ခြည်ကို ကြည့်ပြီး သူပြုံးလိုက်တယ်။ ညက ကြည့်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံဇာတ်လမ်းထဲကလို အလင်းတန်းများဖြစ်နေမလားလို့ သူက တွေးလိုက်သေးတယ်။
“ငါသာ ဒီအလင်းတန်းထဲ ဝင်ပြီး ဇာတ်လမ်းထဲကလို တခြားကမာ္ဘတစ်ခုဆီ ရောက်သွားရင် ..”
တွေးရင်း တွေးရင်းက မိုးဇက် ရင်တွေခုန်လာသလို။ သူ့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်တယ်။ မြောက်ကျွန်းသူတွေ လှတယ်ဆိုတော့ မြောက်ကျွန်းကို ရောက်သွားတယ်လို့ သူက စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူစိတ်ကူးယဉ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားလည်း မသိ။ နာရီကြည့်တော့ ကျောင်းသွားဖို့ အချိန်တောင် နောက်ကျတော့မယ်လေ။
တက္ကသိုလ် ပထမဆုံးတက်ရမယ့်နေ့မို့ထင်တယ်။ ညနေမိုး အစောကြီးနိုးလာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက အခန်းထဲက မထွက်သေးဘဲ ညက မက်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို တွေးပြီး ရင်တွေ ခုန်လာတယ်။ အိပ်မက်ထဲက ထူးဆန်းတဲ့ အလင်းတန်းတစ်ခု။ ပြီးတော့ အလင်းတန်းနဲ့ အတူ ရောက်လာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ သူမကို ပေးခဲ့တဲ့ ကြယ်လေး။
သူမ တွေးရင်း ပြုံးလိုက်သေးတယ်။ အိပ်မက်က ထူးဆန်းလိုက်တာလို့ တွေးပြီး ကျောင်းသွားရဦးမှာပဲဆိုတော့ ကျောင်းသွားဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။
ကျောင်းတော်ရဲ့ တစ်နေရာမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ခေါင်းကို ငုံ့ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းလျှောက်လာကြရဝယ်။
သူတို့တွေဟာ နီးသထက်နီးလာ။ နီးလာ ..။
ပို၍ နီးလာ …..
သူတို့ကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတွေ့ဘဲ ဇာတ်လမ်းကို ရေးရမလား ..။
သူတို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တွေ့ပေမယ့် ဒီအတိုင်း တွေ့ရုံလေးလို့ ဇာတ်လမ်းကို ရေးရမလား။
သူတို့ကို ဘယ်လို ဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာ ….
ခင်ဗျားတို့ပဲ ကြိုက်သလို တွေးလိုက်ကြတော့ဗျာ ……..။
မျက်နှာချင်းဆိုင် ခေါင်းငုံ ့ပြီး လျှောက်လာရင် ခေါင်းချင်းတိုက်မိမှာပေါ့နော်
တွေ ့ကြတဲ့ ဇါတ်လမ်းပေါ့ဗျာ ။ ကောင်လေးက ကောင်မလေး ဆီကနေ ပိုက်ဆံချေးမယ် ။ ပြီးတော့ ပြန်မဆပ်ဘူး ။ နောက်ကြ ကောင်မလေး ချစ်သူ က နိုင်ငံခြားမှာ ရှောသွားမယ် ။ ကောင်မလေး ကိုယ်ဝန်နဲ့ဖြစ်ချိန်မှာ ၊ အကြွေးမပြန်ဆပ်တဲ့ ကောင်လေး နဲ့။ အဲဒါကနေ စရမယ်ဗျ ။